Fitsipika momba ny tsiambaratelo Fepetra voapetraka-fampiasana-rongony mpisolovava
Stumari, LLC. Fepetra fampiasana
Mandaitra hatramin'ny 11 jolay 2018
Fepetra fampiasa famintinana
Stumari dia manome sehatra ho an'ny fiaraha-miasa sy fifandraisana eo amin'ireo matihanina ara-dalàna ("Mpampidinin'ny mpanolo-tsaina") sy ireo mpampiasa mitady fanampiana ara-dalàna. ("Legal Client"). Stumari dia tsy firaharahan'ny lalàna, serivisy fitsidihana ny mpisolovava na masoivoho asa ary tsy manome valiny. Azafady azafady ampiasaina i Stumari ary azafady vakio bebe kokoa ny serivisy ataontsika ao amin'ny fizarana 2 eto ambany.
Ianao no tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny kaontinao, ary amin'ireo hetsika rehetra atao eo ambany kaontinao. Azafady vakio bebe kokoa ny andraikitry ny mpampiasa amin'ny fizarana 3 etsy ambany.
Ny fihetsika sasany, toy ny fampiasana ny serivisy ho an'ny hetsika tsy ara-dalàna, dia tsy navela ao amin'ny Stumari. Azafady vakio bebe kokoa ny momba ny fitondran'ny mpampiasa ao amin'ny fizarana 4 etsy ambany.
Ny votoatiny sasany, toy ny fandrahonana lahatsoratra na votoaty izay manitsakitsaka ny zon'ny zon'ny olon-kafa hafa dia tsy omena an'i Stumari. Stumari dia manana zo hanaisotra ny votoatin'ny mpampiasa-fanitsakitsaka ny politika ataontsika. Azafady vakio bebe kokoa ny momba ny votoaty novokarin'ny mpampiasa ao amin'ny fizarana 5 etsy ambany.
Ny teny manokana dia mifehy ireo mpampiasa ny consultant an'i Stumari. Ohatra:
Ireo mpampiasa ny consultant dia tsy mpiasa na solontenan'ny Stumari.
Tsy misy fifandraisan'ny mpisolovava-client miaraka amin'i Stumari, ary tsy misy adidy amin'ny tsiambaratelo mitranga, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranonkala Stumari, anisan'izany ny fametrahana asa.
Fifandraisan'ny mpisolovava-mpanjifa dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy eo amin'ny Mpiserasera ara-dalàna sy mpampiasa mpampiasa.
Ireo mpampiasa mpanoro hevitra dia tompon'andraikitra manokana amin'ny fiantohana fa ny fampahalalana, ny fangatahana, na ny dokam-barotra napetrany ao amin'ny tranokalan'i Stumari dia mifanaraka amin'ny lalàna rehetra sy ny lalàna momba ny fitondran-tena.
Stumari dia tsy manome karazana antoka azo antoka momba ny fahaiza-manao ara-dalàna, ny fahaizany ary ny kalitaon'ny mpampiasa consultant izay mety ho voatanisa ao amin'ny tranokalanay.
Ireo mpampiasa consultant dia afaka mamorona sy mitazona mombamomba azy ao amin'ny tranokalan'i Stumari. Raha nanao ezaka ara-barotra i Stumari hanamafisana ny fahazoan-dàlana an'ny Mpanolo-tsaina hampihatra lalàna, dia tsy misolo tena ny momba ny fiavian'ny mpampiasa sy ny fahazoan-dàlana i Stumari.
Ny mpampiasa iray mpanolo-tsaina dia mety ho lasa "Mpampiasa amin'ny consultant voamarina" amin'ny fanomezana an'i Stumari ho fanamarinana fanampiny fa izy dia mpisolovava fahazoan-dàlana ary manana toerana tsara amin'ny fampiharana ny lalàna. Ireo mpampiasa mpanoro hevitra voamarina dia mety mandoa vola ho an'ny fidirana amin'ny serivisy Stumari fanampiny sy fitaovana fitantanana fanazaran-tena. Tsy manohana na manome soso-kevitra amin'ny mpampiasa consultant i Stumari ary andraikitry ny Mpanjifa ara-dalàna ny mitandrina alohan'ny hanakarany ny mpampiasa consultant hanao asa ara-dalàna.
Tsy misy vidiny ny mpanjifa ara-dalàna handefasana ny fangatahana asa any Stumari na hampiasa fitaovana na antontan-taratasin'i Stumari. Serivisy serivisy na fanodinana (ohatra: frais amin'ny carte de crédit) dia azo ampiharina amin'ny fangatahana karama ao amin'ny Stumari.
Azafady vakio bebe kokoa momba ireo mpampiasa consultant ao amin'ny fizarana 6 etsy ambany.
Stumari dia mifanaraka amin'ny fepetra fiarovana amin'ny seranan-tsipika digital Millennium Copyright. Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona ny fitaovam-pamoahana na mifandray amin'i Stumari, dia amporisihina ianao hampahafantatra an'i Stumari mifanaraka amin'ny lalàna mifehy ny zotram-bolo nataon'i Stumari. Azafady vakio bebe kokoa ny momba ny Politika DMCA ao Stumari ao amin'ny fizarana 8 etsy ambany.
Stumari dia mety handefa mailaka ho anao amin'ny maha-serivisy azy. Mety hisafidy ireo fifandraisana amin'ny mailaka ianao. Azafady vakio bebe kokoa momba ny fifandraisana mailaka ao amin'ny fizarana 10 etsy ambany.
Stumari dia afaka manova ireo teny ireo amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, hampandre anao momba ny fiovana ara-materialy i Stumari amin'ny alàlan'ny fandefasana fampilazana ao amin'ny tranokalany sy / na fandefasana mailaka any amin'ny adiresy mailaka nomenao an'i Stumari taorian'ny fisoratana anarana. Azafady vakio bebe kokoa momba ny fanovana ireo teny ampiasaina ao amin'ny fizarana 17 etsy ambany ity.
Azafady mba jereo ny politikanao momba an'i Stumari raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny zon'ny mpampiasa ao Stumari.
Azafady mba jerena ny fepetra feno raha te hahalala bebe kokoa.
Amin'ny fidirana na mampiasa ampahany amin'ny tranokala, manaiky ianao ho voafatotry ny fepetra sy ny fifanarahana amin'ity fifanarahana ity. Raha tsy ekenao ny fepetra rehetra sy ny fifanarahana amin'ity fifanarahana ity, dia tsy afaka miditra amin'ny tranokala ianao na mampiasa ny serivisy rehetra. Ny tranokala dia tsy misy afa-tsy amin'ireo olona 18 taona farafahakeliny.
Fepetran'ny fampiasana stumari
Famaritana. Ity teny manaraka ity dia ampiasaina mandritra ireo Teny fampiasana sy manana dikany manokana. Tokony ho fantatrao ny dikan'ireo teny tsirairay ireo.
Ny teny hoe "Serivisy" dia manondro ireo tolotra nomen'ny Stumari, ao anatin'izany tsy misy fetrany ny fidirana an-tserasera Stumari; fitaovam-pifandraisana; fitantanana antontan-taratasy sy vahaolana fitahirizana; sy serivisy fandoavana. Stumari dia tsy manome serivisy mpisolovava mpisolo vava na miasa amin'ny maha masoivoho asa. Manome toerana ahafahan'ny mpampiasa anay hihaona sy hifanakalo amin'ireo vaovao amin'ireo mpampiasa ny consultant izahay.
Ny "Website" dia manondro ny tranokalan'i Stumari izay hita ao amin'ny https://www.Stumari.com, ny tranokala rehetra ary ny subdomain ary ny votoatiny, serivisy ary ny vokatra rehetra hita na amin'ny alàlan'ny tranokala.
"Stumari," "Izahay", ary "Us" dia manondro an'i Stumari, Inc., ary koa ireo mpiara-miasa aminay, talen'ny tompon'andraikitra, tompon'andraikitra, tompon'andraikitra ary mpiasa. Tsy mpampiasa an'i Stumari ireo mpampiasa ny consultant.
"Ilay mpampiasa," "Ianao" sy "Your" dia manondro ilay olona, ​​na orinasam-piangonana na fikambanana izay mitsidika na mampiasa ny tranokala sy / na ny serivisy. Ny mpampiasa iray dia mety Client ara-dalàna, mpampiasa consultant, na izy roa.
Ny "mpampiasa ny manadihady" dia manondro ireo mpampiasa mpanoro hevitra voasoratra amin'ny sehatry ny ara-dalàna izay mety hifandray amin'ny sy manome asa fifanarahana na fifanarahana amin'ny mpanjifa ara-dalàna na mpampiasa consultant amin'ny alàlan'ny serivisy. Ireo mpampiasa ny consultant dia tsy mpiasa na solontenan'ny Stumari. Azafady mba jereo ny fizarana 6 amin'ity fifanarahana ity raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ireo mpampiasa consultant.
"Mpanjifa ara-dalàna" dia manondro 1) Ireo mpampiasa izay mandefa fangatahana avy amin'ireo mpampiasa ny consultant dia manome serivisy ara-dalàna amin'ny sarany ("Jobs"); ary 2) Ireo mpampiasa izay mifandraika amin'ny mpampiasa Mpanolo-tsaina ho an'ny asa fanampiny, izay, ho an'ny tanjon'ny Fizarana 7 eto ambany dia mety hahitana asa maharitra, ankoatry ny asa tany am-boalohany izay nametraka ny Fifandraisan'ny Mpisolo-hevitra Mpanampy-Lalana. Ireo mpampiasa mpanoro hevitra dia mety handefa tolo-kevitra ("boka") ho an'ny asa toy izany ary mety hametraka ireo fifandraisana momba ny fifandraisana amin'ny mpanjifan'ny ara-dalàna amin'ny alàlan'ny taratasy fisoratana anarana na fifanarahana hafa voasoratra. Azafady mba jereo ny Fizarana 6 (b) raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny asa, takelaka, ary ny mpanjifa ara-dalàna
Ny "votoaty" dia manondro ireo votoaty aseho na aseho amin'ny alàlan'ny tranokala, anisan'izany ny tsy misy fehezanteny, antontan-taratasy, fampahalalana, data, lahatsoratra, hevitra, sary, sary, sary, rindrambaiko, fampiharana, firaketana horonantsary, fandraisam-peo, feo, famolavolana, endri-javatra, sy ny fitaovana hafa izay misy amin'ny tranokala. Ahitana ny votoatiny, raha tsy misy fetra ny votoatiny -ny mpampiasa, izay mety ho alain'ny mpampiasa Stumari (Client Legal na mpampiasa consultant).
Momba ny serivisy Stumari.
Ny Stumari Service dia sehatra iray ahafahan'ny fiaraha-miasa sy fifandraisana eo amin'ireo matihanina ara-dalàna sy ireo mitady fanampiana ara-dalàna. Ny serivisy Stumari dia manome fidirana amin'ny vondrom-piarahamonina virtoaly an'ny Stumari an'ny mpampiasa consultant matihanina; fiaraha-miasa mora amin'ny alàlan'ny fitaovana fitantanana ny serasera ao Stumari; tahirin-kevitra fitantanana sy fitahirizana; ary fandoavam-bola tsotra sy azo antoka.
Stumari dia tsy dia lalàna mifehy ny lalàna. Tsy manome endrika ara-dalàna i Stumari. Stumari dia tsy manome torohevitra araka ny lalàna, hevitra, lalàna, toro-hevitra, toro-hevitra, na torohevitra. Ireo mpampiasa ny consultant dia tsy mpiasa na solontenan'ny Stumari. Stumari dia tsy voarohirohy amin'ny fifanarahana eo amin'ireo mpampiasa na amin'ny solontenan'ny mpampiasa. Na izany na tsy misy antony dia azo i Stumari ho tompon'andraikitra amin'ny hetsika na ny tsy fahazoana ny mpampiasa Mpanoro hevitra manao serivisy ho anao.
Stumari Tsy serivisy fitsidihan'ny mpisolovava na masoivoho asa. Stumari dia tsy fahazoan-dàlana amin'ny mpisolovava na masoivoho asa. Stumari dia tsy mifidy na manohana ireo mpampiasa Mpanoro hevitra rehetra mba hanao fanompoana an'ny mpanjifa. Raha mampiasa ezaka mitombina ara-barotra i Stumari mba hanamafisana fa mpisolo vava fahazoan-dàlana ireo mpampiasa mpampiasa, dia tsy manome antoka, antoka, na fisolo tena araka ny fahaizana ara-dalàna, fahaiza-manao, kalitao, na fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa Mpanolotsaina rehetra. Stumari dia tsy manome antoka na manome toky fa ny mpampiasa mpanoro hevitra dia voan'ny fiantohana andraikitra manan-danja. Stumari dia manentana ny mpanjifa ara-dalàna handinika izay mpampiasa ny consultant alohan'ny fanekena torohevitra matihanina.
Stumari dia tsy mitoetra ho an'ny mpampiasa azy. Stumari dia manolotra sehatra iray ahafahan'ny olona mitady fanampiana ara-dalàna sy hifanerasera amin'ireo matihanina ara-dalàna. Stumari dia tsy manohana ireo mpampiasa ny Mpanolotsaina azy ary tsy manome alalana ireo fanambarana ataon'ny mpampiasa consultant eo amin'ny lampihazo. Stumari dia tsy misolo tena ny momba ny fahazoan-dàlana ireo mpamatsy tolotra tsy mpisolovava.
Stumari Tsy hahazoana valiny. Indraindray dia mety handefa ny hevitr'ireo mpampiasa consultant ny mpanjifa ara-dalàna; Ireo famerenana ireo dia tsy fiantohana, antoka, na faminaniana momba ny vokatry ny raharaha ara-dalàna ho avy. Stumari dia tsy handray andraikitra na adidy amin'ny karazana atiny amin'ny votoatin'ny mpampiasa na torohevitra ara-dalàna izay tojo anao na amin'ny alàlan'ny tranokala, ary ny fampiasana na ny fiankinana amin'ny votoatin'ny mpampiasa-na mpampiasa na torohevitra ara-dalàna irery ihany no atahanao manokana.
Ny fampiasana an'i Stumari dia tsy mamorona fifandraisana amin'ny mpampiasa mpisolo vava amin'ny Stumari. Stumari dia tsy manome torohevitra na serivisy ara-dalàna. Izay fampiasana ny serivisy Stumari dia tsy natao ary tsy mamorona fifandraisana mpisolo vava. Ny fifandraisana rehetra avy amin'i Stumari dia mety tsy tazonina ho tsiambaratelo. Stumari dia tsy tompon'andraikitra amin'ny hetsika na ny tsy fahazoana ny mpampiasa Mpanolotsaina manao asa fanompoana ho anao.
Andraikitra mpampiasa. Ianao ary ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny kaontinao sy izay rehetra mitranga mandritra ny fidirana anao na mampiasa ny kaontinao. Ny fiarovanao no andraikitrao.
Security Security kaonty mpampiasa. Raha misoratra anarana amin'ny serivisy ianao dia hamorona kaonty misy anao manokana izay ahitàna anarana iray miavaka sy tenimiafina hahazoana fidirana amin'ny serivisy ary hahazo hafatra avy amin'i Stumari. Ianao no tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny fiarovana ny kaontinao, ary ianao no tompon'andraikitra tanteraka amin'ny hetsika rehetra mitranga eo ambanin'ny kaonty sy izay mety ho fihetsika mifandraika amin'ny kaonty. Manaiky ianao hampandre an'i Stumari avy hatrany momba ny kaonty tsy nahazoana alàlana, na fandikan-dalàna hafa. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka na fatiantoka na fahavoazana vokatry ny fampiasana tsy ara-dalàna ny solosainao, fitaovana finday, na fitaovana compte sy / na kaonty hafa ianao. '
Fifandraisana amin'ny mpampiasa consultant. Satria tsy azontsika antoka ny fahaizan'ny mpampiasa ny Mpanolo-tsaina momba ny filanao manokana, dia manentana ny mpanjifa ara-dalàna izahay hikaroka izay mpampiasa ny consultant alohan'ny fanekena torohevitra matihanina. Ny mpanjifa ara-dalàna dia mety mangataka ihany koa ny fifanarahana momba ny fifanarahana ara-dalàna izay mamaritra ny fehezan-teny, ambaratonga, fetra ary ny fepetra amin'ny fisolontena.
Tsy misy fiankinana amin'ny votoaty novokarin'ny mpampiasa. Ny votoatiny nomen'ny mpampiasa navoaka tao amin'ny tranokala, toa ny lahatsoratra bilaogy, dia natokana ho an'ny tanjona fampahalalana irery, tsy misy antoka fa marina, marina, ary marina ny votoatin'ny mpampiasa. Ny votoatin'ny mpampiasa-tanana dia tsy fanoloana torohevitra ara-dalàna arak'asa na fanononam-boloana hanome torohevitra momba ny zava-misy manokana. Tsy tokony hahemotra na oviana ny fitadiavana torohevitra ara-dalàna na tsy miraharaha torohevitra ara-dalàna arakaraka ny votoatin'ny mpampiasa-ny mpampiasa. Ny fahatarana amin'ny fitadiavana torohevitra araka ny lalàna dia mety hiteraka fandavana izay mety anananao, arakaraka ny fetran'ny lalàna voafetra. Ny votoatin'ny mpampiasa dia tsy fehezin'ny fanjakana na barika nasionaly.
Fanarahana lalàna. Ianao dia misolo tena sy manome toky fa: (i) manana fahefana ianao, ary manana taona ara-dalàna amin'ny fanapahana anao, mifamatotra amin'ny tenanao amin'ity Fifanarahana ity; ii) ny fampiasana ny serivisy dia ho an'ny tanjona avelan'ity fifanarahana ity; (iii) ny fampiasanao ny serivisy dia tsy hanelingelina na tsy fanitsakitsahana ny zon'ny fananana ananan'ireo antoko fahatelo; ary (iv) ny fampiasanao ny serivisy dia hanaraka ny lalàna, lalàna ary fitsipika rehetra ao an-toerana sy fanjakana ary federaly, ary amin'ny politika rehetra ao Stumari.
Ampiasao sy fitondra fameperana. Azonao ampiasaina ny serivisy raha toa ka manaraka fitsipika vitsivitsy vitsivitsy ianao. Ireto manaraka ny fameperana sy ny fitondran-tena fameperana no fitsipika fototra andrasanay ny hanaraka ny mpampiasa mandritra ny fampiasana ny serivisy. Tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny mpampiasa anay izahay, ary manan-jo hanidy ny kaonty raha mila.
Ny votoaty voarara. Manaiky ianao fa tsy hiatrika ny toe-javatra rehetra ianao hamindra izay atiny (ao anatin'izany ny rindrambaiko, soratra, sary, na fampahalalana hafa)
tsy fanarahan-dalàna na mampiroborobo ny tsy fanarahan-dalàna
manala baraka, fanararaotam-pahefana, fanararaotana, mandrahona, na mandrisika herisetra amin'olona na vondrona
III. dia ny sary vetaveta, fanavakavahana, na raha misy manimba na mampitahorana olona na vondrona iray noho ny fivavahana, ny lahy sy ny vavy, ny fironana ara-pananahana, ny firazanana, ny foko, ny taonany, na ny kilema
dia spam, dia milina- na vokarin'ny kisendrasendra, dia fanaovana dokam-barotra tsy nahazoana alàlana na tsy takiana, taratasy momba ny rojo, endri-javatra hafa tsy nahazoana alàlana, na endrika loteria na filokana;
misy na mametraka otrikaretina, kankana, malware, soavaly Trojan, na votoaty hafa noforonina na natao hamongorana, hanimba na hametra ny fiasan'ny rindrambaiko, hardware, na telecommunication na hanimba na hahazoana fidirana tsy nahazoana alalana amin'ny data rehetra na fampahalalana hafa an'ny antoko fahatelo;
fanitsakitsahana ny zo fananan'ny antoko na iza na iza, anisan'izany ny patanty, ny marika, ny tsiambaratelo momba ny varotra, ny zon'ny mpamorona, ny zon'ny besinimaro, na ny zon'ny hafa
VII. manelingelina olona na sampandraharaha, anisan'izany ny mpiara-miasa ato na ny solontenantsika; na
VIII. manitsakitsaka ny fiainana manokan'ny antoko fahatelo.
Tsy maintsy mihoatra ny taonan'ny mpampiasa 18 taona ny mpampiasa dia misolo tena ianao fa efa mihoatra ny 18 taona no nokendren'i Stumari fa tsy mikendry ny ankizy na zatovo latsaky ny 18 taona izahay, ary tsy avelanay mpampiasa ny 18 taona eo amin'ny serivisinay. Raha mahafantatra Mpampiasa iray izay latsaky ny 18 taona isika dia hofoananay avy hatrany io kaonty mpampiasa io.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa; Stumari Mety hanara-maso ny fifandraisana. Ny fatiantoka, fahaverezana na fahasimbana ateraky ny fifandraisana misy eo amin'ny mpampiasa, ao anatin'izany, tsy misy fetra, Posting Job, izay ampidirinao na handraisanao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy anao. Araka ny fahaizanay, izahay na teknolojia ampiasainay dia mety hanara-maso sy / na mirakitra ny fifandraisanao amin'ny ankapobeny amin'ny serivisy, na dia tsy mamaritra ny fifandraisana manokana ataonao aza ianao.
Zo ny hanajanonana ny kaonty. Isika ny manana (na dia tsy adidy aza izany), amin'ny fahefantsika manokana, no mamaritra raha mety na mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fampiasana na ny fepetra ataon'ny mpampiasa, na mampitsahatra na mandà ny fidirana sy ny fampiasana ny serivisy ho an'ny mpampiasa izay misy antony, miaraka na tsy misy fampilazana mialoha.
Ny votoatiny novokarina mpampiasa. Manana ny votoatinao ianao, saingy avelanao hanana zo sasany aminay, mba hahafahantsika maneho sy mizara ny votoatinao. Zontsika ny manaisotra ny votoatiny raha mila.
Andraikitry ny votoatin'ny mpampiasa. Azonao atao ny mamorona votoaty, voasoratra na raha tsy izany, mandritra ny fampiasana ny serivisy ("Content-Generated Generation"). Ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny votoatin'i, sy ny voka-dratsy ateraky ny, ny votoatiny nomen'ny mpampiasa izay alefanao, alefaso, fampifandraisana, na fampiasa amin'ny alàlan'ny serivisy, na inona na inona endriky ny atiny. Ny fatiantoka, fatiantoka na fahasimbana ateraky ny fampiasana ny votoatin'ny mpampiasa nofonosinao na azonao alaina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy anao. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fisehosehoana ampahibemaso na fanararaotam-po amin'ny votoatin'ny mpampiasa anao izahay.
Zo mandefa Ianao dia misolo tena sy manome toky fa manan-jo handefa ny votoatiny novokarina mpampiasa izay alefanao. Ny tena manokana dia manome toky ianao fa efa narahinao tanteraka ny fahazoan-dàlana avy amin'ny antoko fahatelo mifandraika amin'ny votoatin'ny mpampiasa-ny mpampiasa, ary ianao no nandray ny dingana rehetra tokony handalovana ireo mpampiasa izay misy fepetra takiana.
Stumari May mety hanova na hanala ny atiny. Isika manana ny zo (na dia tsy adidy aza), amin'ny maha-andavanantsika azy, no hamaritana na mety misy ary mifanaraka amin'ny Fampiharana arak'asa izany na tsia, na mandà na manala izay votoaty novolavolain'ny mpampiasa izay, araka ny hevitray. , manitsakitsaka ny politika Stumari na manimba, tsy mendrika na manohitra. Stumari fanampiny dia manana zo hanao format sy fanovana ary hanova ny fomba aseho avy amin'ny votoatin'ny mpampiasa-na mpampiasa.
Ny fananana ny votoatin'ny mpampiasa-ny mpampiasa. Afa-tsy ny votoatiny izay niainga avy tany Stumari, dia tsy mitaky fananana izay votoatiny izay ampitaina, voatahiry, na zahana ao amin'ny kaontinao. Tazonao ny fananana rehetra, ny fifehezana ary ny andraikinao amin'ny votoatin'ny mpampiasa nofidinao. Azonao atao ny manara-maso ny fidirana amin'ny votoatin'ny mpampiasa anao amin'ny alàlan'ny fikandrana ao amin'ny kaontin'ny mpampiasa anao.
Fanomezana fahazoan-dàlana. Avelao i Stumari hampiasa ny votoaty ampidirinao ao amin'ny serivisy nefa tsy manitsakitsaka ny zonao anananao, omenao ireto zo ireto izahay: amin'ny famoahana ny votoatiny amin'ny alàlan'ny tranokala, omena anao i Stumari sy ireo mpandimby antsika manerantany, tsy azo resahina, feno -Atra sy ny royalti-maimaim-poana, ary tsy fahazoan-dàlana manokana hampiasaina, mamerina, maneho, manova, mampifanaraka, mizara ary manatanteraka ny votoaty mifandraika amin'ny tanjon'ny orinasan'i Stumari. Ity fahazoan-dàlana ity dia tsy manome an'i Stumari ny zo hivarotra ny votoatin'ny mpampiasa na raha tsy izany dia mizara ivelan'ny tranokalanay. Ity fahazoan-dàlana ity dia hijanona amin'ny fotoana esorina amin'ny tranokala.
Ireo mpampiasa mpanoro hevitra. Mpampiasa amin'ny consultant dia matihanina tsy miankina ara-dalàna izay manolo-tena hanatanteraka serivisy consultant ho an'ny mpanjifa mety ho an'ny lalàna. Tsy mpiasa ao Stumari izy ireo.
Tsy misy fifandraisana amin'ny mpiserasera amin'ny alàlan'ny fampiasana tranonkala. Ny fampiasana ny tranonkala Stumari dia mety tsy hanisy fifandraisana fifandraisana amin'ny mpampiasa client amin'ny mpampiasa consultant. Ny fampahalalana na alefa ao amin'ny tranokala na amin'ny alàlan'ny tranokala, anisan'izany, tsy misy fetra ny valin'ireo fanontaniana ara-dalàna navoaka ao amin'ny tranokala; fampahalalana ao amin'ny Stumari's Guides and Documents; ny fampahalalana navoaka am-pahibemaso tao amin'ny tranokala; na fampahalalana nalefa tamin'ny hafatra tsy nangataka tamin'ny mpampiasa iray dia tsy natao ho torohevitra ara-dalàna, tsy tsiambaratelo ary tsy mamorona fifandraisana mpisolovava. Izy io dia raisina ho toy ny votoatin'ny mpampiasa.
Fifandraisana amin'ny mpisolovava amin'ny alàlan'ny fampiasana serivisy. Fifandraisan'ny mpisolovava-mpanjifa dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy eo anelanelan'ny mpampiasa sy ny mpampiasa consultant ihany. Ireo mpanjifa ara-dalàna dia mety handefa asa amin'ny alàlan'ny serivisy. Ireo mpampiasa mpanoro hevitra dia mety handefa anarana ary manadihady antsipirihany momba ireo asa ireo alohan'ny fanekena. Raha ekena ny fahazoana ny fisoloan'ny mpampiasa ny mpanolo-tsaina dia voafetra ihany amin'ilay raharaha nifanekena tao amin'ny Bid raha tsy nisy ny mpampiasa ara-dalàna sy ny mpampiasa consultant avy eo nampandrafitra ny fandaharan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny sonia fifanarahana vita sonia na fifanarahana an-tsoratra hafa. ataovy mialoha ny tolo-kevitra nekena teo aloha. A Bid dia tsy mpisolo toerana fifampidinihana manokana na an-telefaona amin'ny mpisolovava iray manana alalana amin'ny fampiharana ny lalànao manokana, ary tsy tokony hiantehitra amin'ny fampahalalana ao amin'ny Bid ianao raha torohevitra ara-dalàna. Stumari dia manao izay rehetra azo atao mba hiantohana ny fiainana manokan'ny boka sy hafatra manokana amin'ny serivisintsika, saingy tsy afaka manome antoka ny tsiambaratelo izany. Ny serivisy mitaky tsiambaratelo dia tokony hatao ivelan'ny serivisy Stumari, toa amin'ny alàlan'ny telefaona.
Andraikitra mpampiasa. Ireo mpampiasa mpanoro hevitra dia tompon'andraikitra irery amin'ny fampahafantarana fa misy fampahalalana, fangatahana, na dokam-barotra napetrany na napetrany ao amin'ny tranokala, anisan'izany ny tsy misy fetrany ny votoatin'ny mpampiasa-ny mpampiasa, ary ny fifandraisana izay mety manana azy ireo amin'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny tranokala na ny serivisy. ny lalàna rehetra sy ny fitsipiky ny fitondrantena matihanina, ao anatin'izany ny momba ny fampiharana tsy nahazo alàlana ary ireo mifehy ny endrika, ny fomba na ny votoatin'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa, ny doka, na ny raharaha hafa.
Aloaon'ireo mpampiasa consultant. Ny teny manokana dia mifehy ny mpampiasa sy ny fandoavam-bola.
Stumari Tsy antoko iray hifanarahana. Ny mpanjifa ara-dalàna dia mety hiara-miasa amin'ny mpampiasa consultant amin'ny alàlan'ny famoahana sy fanekena ny asa. Ny fifanarahana toy izany dia eo anelanelan'ny mpanjifa ara-dalàna sy mpampiasa mpampiasa. Stumari dia tsy hiaraka amin'ny fifanekena asa ho an'ny asa natolotra amin'ny alàlan'ny serivisintsika, raha tsy hoe nalefan'ny manampahefana Stumari. Stumari manamora ny fifanarahana amin'ny alàlan'ny famatsiana sehatra iray ho an'ny fitantanana serasera sy fitaovana fandoavana.
Ny fandoa ara-dalàna rehetra dia aloa amin'ny mpampiasa consultant. Tsy manome serivisy i Stumari ary tsy mikarakara serivisy. Ny fandoavam-bola natao amin'ny mpampiasa consultant amin'ny alàlan'ny fandaharanasa faktiora an'i Stumari dia nafindra mivantana any amin'ny kaontin'ny fandoavana ny mpampiasa mpampiasa, tsy misy tolotra sy fanodinana fiasa (ohatra: saran'ny carte de crédit).
III. Ireo mpampiasa consultant dia hahazo vola amin'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny fifandraisan'ny mpampiasa rehetra. Ireo mpampiasa consultant izay mahazo asa amin'ny alàlan'ny serivisy dia hahazo fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny fifanakalozana rehetra mifandraika amin'izany mpampiasa izany, ao anatin'izany ny fifanakalozana manaraka izay tsy voatery mifandray amin'ny Job voalohany. Raha misy Mpanjifa ara-dalàna tsy mety na tsy afaka mandoa vola amin'ny alàlan'ny Stumari, ny mpampiasa consultant dia manaiky hampandre an'i Stumari ny fandoavam-bola vaovao. Ny fandoavan'ny mpanjifa ara-dalàna an'ny mpampiasa consultant, natao ivelan'ny serivisy nefa tsy nampandrenesina mialoha an'i Stumari, dia fanilihana tanteraka an'ny roa tonta amin'ny fiarovana ny antoka momba ny fandoavam-bola Stumari araka ny voaresaka ao amin'ny fizarana 14 sy 15 etsy ambany, na dia mety misy ifandraisany amin'ny teo aloha aza. fandoavam-bola natao tao anatin'ny serivisy.
Kaody fampiroboroboana sy credits. Stumari dia afaka mamorona kaonty fampiroboroboana izay azo navotana amin'ny fahazoan-kaonty, na endri-javatra hafa na tombontsoa mifandraika amin'ny serivisy mpampiasa iray an'ny Mpanolotsaina, mifanaraka amin'ireto fe-potoana manaraka ireto ary misy fepetra fanampiny napetrak'i Stumari isaky ny fototry ny fehezan-dalàna fampiroboroboana ( "Code de promo"). Ny teny manokana dia mifehy ny mpampiasa sy ny fandoavam-bola.
Ny fampiasana ny kaody promo dia tsy manisy fifandraisana amin'ny mpampiasa mpisolo toerana. Indraindray dia mety hanana fidirana amin'ny fihenam-bidy nomen'i Stumari ny mpanjifa ara-dalàna izay, amin'ny ampahany, dia mampiasa ny vola nataon'i Stumari handoavana ny ampahany amin'ny saram-panjakana aloa ataon'ny mpanjifa ara-dalàna amin'ny mpampiasa consultant. Ny fampiasana coupons toy izany dia tsy manondro fifandraisana misy eo amin'ny mpisolovava eo anelanelan'i Stumari sy ireo mpampiasa ny consultant izay ampiasana ny tapakila amin'ny fandoavam-bola karama avy amin'ny mpanjifa ara-dalàna.
Kode Promo dia tsy maintsy ampiasain'ny mpihaino nokasaina, ho an'ny tanjona kendrena ary amin'ny fomba araka ny lalàna.
Ny kaonty promo dia mety tsy azo averina, hamidy na hamindrana amin'ny fomba rehetra, na atao azon'ny besinimaro amin'ny ankapobeny (na alefa any amin'ny forum iraisana na tsia), raha tsy avelan'ny Stumari mazava. Ny Kaody Promo dia tsy manana fiantohana vola ary mety lany fotoana na lany amin'ny Stumari amin'ny fotoana rehetra, na inona na inona antony, mialoha ny fampiasanao. Stumari dia manana zo hanana mitazona na hanala fatiantoka na lafin-javatra hafa na tombontsoa azo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Promo Codes na anao na mpampiasa hafa raha toa ka manapa-kevitra na mino i Stumari fa diso ny fampiasana na ny fanavotana ny volavolan-dalàna. tsy ara-dalàna, na fanitsakitsahana ireo fehezan-dalàna momba ny Promo Code.
Mpanolotra mpampiasa asa amin'ny mpampiasa consultant.
7.1 Vola fahombiazana amin'ny asa. Raha toa ka eken'ny mpampiasa iray ny consultant dia manome asa ("voarindra asa") nataon'ny mpampiasa iray (tsirairay, "mpampiasa mpampiasa"), na amin'ny fe-potoana tsy voafetra na maharitra, mandritra na fe-potoana valo ambin'ny folo (18) volana (ny vanim-potoana toy izany, ny "vanim-potoana fanolorana" natokana "aorian'ny nanombohan'ny mpampiasa consultant ny asa voalohany ho an'ny mpampiasa toy izany (tsirairay," Fanolorana voarindra "), ireto fepetra sy fepetra manaraka ireto dia tokony hihatra:
Ho an'ireo mpampiasa consultant.
Ny mpampiasa Mpanolo-tsaina tsirairay dia manaiky fa (1) raha mahazo takona voasarona ianao, dia ampahafantaroinao haingana an'i Stumari ny datin'ny niandohan'ny asa nomenao (ny "Daty fanombohana") sy ny fepetra fototra amin'ny Fanolorana voaly (ary ampahafantaro an'i Stumari haingana ny fanoratana. fa ny daty fanombohana na atolotra ny fiovana amin'ny fotoana rehetra), (2) omenao an'i Stumari ny (a) kopian'ny Fanakonana feno tanteraka, na (b) manatanteraka antontan-taratasy eo anelananao, ilay mpampiasa mpampiasa sy Stumari izay milaza zavatra Ny fepetra momba ny asa, ao anatin'izany, manomboka ny daty fanombohana sy ny tambin-karama, avy hatrany aorian'ny fanoratana ny taratasy fanolorana asa voarakitra eo anelanelanareo sy ilay mpampiasa mpampiasa (ny "Daty mahomby"), araka ny nangatahin'i Stumari, ary (3) anao hampandre an'i Stumari avy hatrany amin'ny fanoratana aorian'ny famaranana ny asanao amin'ny maha mpiasa anao raha (a) Mpampiasa mpampiasa mamarana ny Fonenanao voakaly mifototra amin'ny fampisehoana tsy mahomby ao anatin'ny sivifolo (90) andro amin'ny daty nanaovanao ny Fonenana voakaly. nanomboka, na (b) nafoinao an-tsitrapo ny fononanao voarakotra ao anatin'ny sivifolo (90) andro aorin'ny nanombohanao ny Fonenana voakaly. Raha toa ka alohan'ny daty fanombohana, na ianao na mpampiasa mpampiasa dia tsy hanomboka ny fifandraisana momba ny asa araraotin'ny Cover Cover, dia ampahafantaro an-tsoratra avy hatrany i Stumari.
Ho an'ny mpampiasa mpampiasa.
Rehefa eken'ny mpampiasa iray ny mpanolo-tsaina ny fanomezana anao voasarona, manaiky ianao fa mandoa vola handoa an'i Stumari (tsirairay avy, "Vola fahombiazana") mitovy amin'ny salan'isa manaraka ny karama mpampiasa an'ny Mpanolotsaina voarakitra ao amin'ny Taratasy voakaly (ny “Base base an'ny mpampiasa ny mpanolo-tsaina Karama ”), izay vola azo aloa ary azo averina mihoatra ny telopolo (30) andro aorian'ny daty fanombohana ary raha tsy izany dia mifanaraka amin'ny fehezanteny voalohany amin'ny fizarana 13.b. ary Fizarana 13.d. hitranga amin'izany:
Raha daty fanombohana dia mitranga amin'ny na alohan'ity andro manaraka ity aorian'ny fiantombohan'ny asa voalohany an'ny mpampiasa-mpampiasa consultant Job Base Percentage Salary isan-jato
1-182 andro 15%
183-365 andro 10%
366-550 andro 5%
≥ 551 andro 0%
Amin'ny fanekena ireo fepetra fampiasana ireto dia nanaiky ny mpampiasa mpampiasa fa nomena alalana i Stumari hampiditra ny kaontin'ny mpampiasa mpampiasa ny vidin'ny fahombiazana rehetra ary aloa vola amin'i Stumari eto ary tsy mila fampandrenesana fanampiny na fanekena.
7.2 Vola fandoavam-bola.
Na eo aza ny voalaza etsy aloha, raha misy ny fifanolanan-tena, raha toa ka misy mpampiasa mpampiasa afaka manorina fa ny mpampiasa mpampiasa dia manana dingana mavitrika (araka ny voafaritra eto ambany) miaraka amin'ilay mpampiasa ny consultant alohan'ny fampiasana ny tranokalan'i Stumari sy / na serivisy (ohatra, ny mpampiasa consultant efa nanomboka ny fizotran'ny dinidinika tamin'ny mpampiasa mpampiasa ary tsy mbola nifarana ny dingana toy izany, na ny mpampiasa mpampiasa dia nahazo ilay resin'ilay mpampiasa consultant avy amina masoivoho asa na headhunter ary efa nodinihin'ilay mpampiasa mpampiasa), ny mpampiasa mpampiasa dia mety Averina amin'ny fandoavana ny haba. Na izany aza, ny fanapaha-kevitra farany momba ny hoe ny fandoavan-tsoa amin'ny fahombiazan'ny mpampiasa iray amin'ny alika voakaly voamarina dia amin'ny alàlan'ny fahendren'i Stumari ihany. Ho an'ireo tanjona momba azy ireo, ny "dingana mavitrika" dia midika hoe fifampiresahana mivantana, fifaneraserana, amin'ny fifanarahana fandraisana am-pahavitrihana na fandraisana karama izay tsy mbola nanaovana fanapahan-kevitra iray hametrahana kandida iray na nolavina, tao anatin'ny telo (3) volana talohan'ny fampiasany. ny tranokala sy / na serivisy ho an'ny mpampiasa iray mpanadihady izay misy ao amin'ny rafitra fanaraha-maso ny fangatahana mpampiasa mpampiasa na izany dia natolotry ny maso ivoho iray.
RAHA TOERANA FAMPIASANA anao izay mampiasa ny tranokalanay sy / na serivisinao, dia manaiky an'io fepetra mandoa vola io ianao. Raha tsy ekena ny iray amin'ireo fepetra ireo dia ajanony ny kaontinao ary ajanony ny fampiasana ny tranokalanay sy ny serivisinao amin'ny ANTOKO ARY FAMPISEHOANA HANAO FANAOVANA AN-TOKANY ARY FAMPISEHOANA AZY ATAO FAHAFATESANA NA FAMPISEHOANA NY FAMPISEHOANA IANAO. Raha misy mpampiasa mpampiasa mivezivezy ny tranokalanay sy / na serivisy aorian'ny nahitany ny mpampiasa iray amin'ny consultant amin'ny alàlan'ny tranokalanay sy / na serivisitra ary manakarama ny mpampiasa consultant, ny mpampiasa mpampiasa dia hoterena vola handoa fahombiazana mitovy amin'ny 25% amin'ny Salary Base an'ny Mpanolotsaina. Mpampiasa sy i Stumari dia afaka manadino ny kaonty Stumari mpampiasa mpampiasa.
Raha (a) ny mpampiasa mpampiasa dia manakaratra mpanolo-tsaina iray amin'ny mpampiasa ary mamarana ny asan'ny mpampiasa consultant miorina amin'ny fahombiazana tsy mahomby ao anatin'ny sivifolo (90) andro taorian'ny Andro fanombohana, (b) Mpampidinin'ny mpampiasa iray dia manapitra an-tsitrapo ny asany mandritra ny sivifolo (90) andro ny Andro Fanombohana, na (c) ny Mpanolo-tsaina mpampiasa dia tsy manomboka asa satria na ny mpampiasa mpampiasa na ny consultant mpampiasa dia misafidy ny tsy hanomboka ny fifandraisana momba ny asa izay raisina ao amin'ny Taratasy voakaly (samy, "Faranana amin'ny hetsika"), rehefa nahazo ny taratasy sy ny fanamafisana an-tsoratra. momba izany fampahalalana izany dia hamerina tanteraka amin'ny mpampiasa mpampiasa i Stumari ny karama fahombiazana mifandraika amin'ny Mpanelanelana mpampiasa.
Antoko fahatelo. Mety misy votoatiny avy amin'ireo antoko fahatelo ao amin'ny tranokalan'i Stumari, toy ny lahatsoratra bilaogy nosoratan'ny mpampiasa hafa na rohy mankany amin'ny tranonkala hafa. Satria tsy afaka mifehy an'ity atiny ity izahay dia tsy tompon'andraikitra amin'izany atiny izany na ho an'ny tranonkala izay mety mifandray.
Fidirana amin'ny votoatin'ny antoko fahatelo. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy, dia afaka miditra amin'ny votoatiny misy ianao na avy amin'ny antoko fahatelo ("Ny votoatin'ny antoko fahatelo"). Ny fampiasana ny serivisy dia fanekena ho an'i Stumari hanolotra ity atiny anao aminao. Ekenao ny andraikitry ny rehetra, ary mieritreritra ny loza rehetra mety hitranga ianao, amin'ny fampiasanao ny votoatin'ny Antoko fahatelo.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny antoko fahatelo. Amin'ny maha-serivisy an'ny serivisy anao, i Stumari dia afaka manome anao rohy mety amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ary koa endrika hafa amin'ny votoatin'ny antoko fahatelo. Ireo rohy ireo dia nomena tamim-pahalalahana ho an'ny mpanjifan'ny serivisy. Izahay dia tsy manana fifehezana ny tranokalan'ny antoko fahatelo na ny votoaty na ny fampiroboroboana, ny fitaovana, ny fampahalalana, ny entana na ny serivisy misy azy ireo. Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo votoaty toy izany dia tsy misolo tena isika na manondro fa ekentsika na ekena, ary tsy tompon'andraikitra isika, ny fahitsiana na ny fahatokisana ny hevitra, torohevitra, na fanambarana nataon'ireo antoko hafa ankoatra an'i Stumari. Tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny atolotry ny antoko fahatelo izahay amin'ny alàlan'ny tranokalanay. Raha manapa-kevitra ny handao ny tranokala ianao ary miditra amin'ny votoatin'ny antoko fahatelo dia manao izany amin'ny loza mitokana ianao ary tokony ho fantatrao fa tsy fehezin'ny fanjakana intsony ny fehezinay sy ny politikantsika. Tokony hamerina mijery ireo teny sy politika azo ampiharina ianao, ao anatin'izany ny fomba momba ny fiainana manokana sy ny fanangonana angon-drakitra.
Tsy misy fanomezan-dàlana hampiasa ny votoatin'ny antoko fahatelo. Ity fifanarahana ity dia tsy manome alalana anao hizara, haneho ampahibemaso, hanatontosana am-pahibemaso, hampiasa, hanova, na hampiasana izay votoatin'ny Antoko fahatelo raha tsy eken'ny alalàn'ny fifaneken'i Stumari.
Fanitsakitsahana ny zon'ny mpamaky sy DMCA. Raha mino ianao fa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona ny fananana mifandraika na mifandraika amin'i Stumari, dia ampahafantaro an'i Stumari mifanaraka amin'ny politikam-pitsipika momba ny zotram-bolo Digital Millennium.
Fampitsaharana ny kaonty misy ireo namerimberina. Stemari manaja ny zon'ny fananana hafa ananan'ny hafa ary mangataka ny mpampiasa anay hanao toy izany koa. Araka ny 17 USC 512 (i) ao amin'ny lalàna mifehy ny zon'ny Etazonia, hanajanona ny fidirana mpampiasa sy ny fampiasana ny tranokala isika raha, amin'ny toe-javatra mety, dia tapa-kevitra ny mpampiasa ny ho mpandika ny zon'ny mpamorona na zon'ny fananana ara-tsaina hafa. an'i Stumari na hafa. Azontsika atao ny mampitsahatra ny fidirana amin'ireo mpandray anjara na mpampiasa izay hita imbetsaka mba hanomezana na hamoaka ny votoatin'ny antoko fahatelo voaro nefa tsy manana zo sy fahazoan-dàlana ilaina.
Tsetsatsetsa-droa DMCA. Raha tompon'ny zon'ny mpamorona ianao na tompon'andraikitra amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona ary mino, amin'ny finoana tsara, fa misy ireo fitaovana omena ao amin'ny serivisy an'ny serivisy amin'ny zotram-pandraketanao, azonao atao ny mametraka fampahafantarana mifanaraka amin'ny Digital Millenium Copyright Act (jereo ny 17 USC 512) ("DMCA") amin'ny alàlan'ny fandefasana fampandrenesana fakan-tsoratra amin'ny fomba tsara amin'ny alàlan'ny fanoratana ho an'ny mpandrindra ny zon'ny mpamorona voatendry ao Stumari ao amin'ny 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104.
Ny valiny ho an'ny DMCA. Raha mandray andraikitra i Stumari ho valin'ny fanamarihana mpandika lalàna, dia hanao ezaka tsara ny hifandraisana amin'ny antoko izay nanolotra ny votoatiny toy izany tamin'ny alàlan'ny adiresy mailaka farany indrindra, raha misy, nomen'ny antoko an'i Stumari. Izay fanamarihana fandikan-dalàna DMCA dia azo ampitaina amin'ny fety izay nanome ny atiny na ho an'ny antoko fahatelo toa ny ChillingEffects.org.
Counter-Notices. Raha mino ianao fa ny atiny noforonin'ny mpampiasa izay nesorina tamin'ny tranokala dia tsy manimba, na manana alalana avy amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona ianao, ny tompon'ny zon'ny mpamorona, na mifanaraka amin'ny lalàna, handefa sy hampiasa ny atiny natolotrao amin'ny tranokala, azonao atao ny mandefa fanamarihana mifanohitra amin'ny endrika mifandanja amin'ny mpiaro ny zon'ny mpamorona an'i Stumari amin'ny alàlan'ny fampahalalana mifandraika voalaza etsy ambony.
Famaliana amin'ny DMCA Counter-Notices. Raha misy fandraisana tsikombakomba omen'ny mpandrindra ny zon'ny mpamorona an'i Stumari, i Stumari dia afaka mandefa kopia an-tsoratry ny fanamarihana amin'ny fangatahana voalohany ary mampahafantatra an'io olona io fa mety hamerina ny votoaty nesorina tao anatin'ny 10 andro fandraharahana. Raha tsy mametraka ny sahan'ny fitsarana ny mpahazo ny zon'ny mpamorona ny zon'ny mpamorona, ny mpikambana na ny mpampiasa, dia haverina ao amin'ny tranokala mandritra ny 10 ka hatramin'ny 14 andro ny votoaty nesorina rehefa avy nahazo ny tsikombakomba.
Fanamarihana fananana ara-tsaina. Stumari mitazona ny fananana rehetra fananana ara-tsaina, anisan'izany ny zon'ny mpamorona, ny patanty ary ny mari-pamantarana.
Tsy misy famindrana. Stumari mihazona ny fananana ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra amin'ny karazany rehetra mifandraika amin'ny tranokala sy ny serivisy, ao anatin'izany ny zon'ny mpamorona, ny patanty, ny marika ary ny zon'ny tompom-pananana hafa. Ny marika famantarana, marika serivisy, sary sy logo dia ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny tranokala ary ny serivisy mety ho mariky ny fety fahatelo. Io fifanarahana io dia tsy mamindra aminay avy aminao any Stumari na koa fananana ara-tsaina avy ao amin'ny antoko fahatelo, ary mijanona ho azy daholo ny zo sy ny anaram-boninahitra ary ny tombony ary ny fananana toy izany (eo anelanelan'ireo antoko). Izahay dia manaja ny zo rehetra izay tsy omena anao mazava eo ambanin'ity Fifanarahana ity.
Amin'ny fomba manokana, Stumari, Stumari.com, ary ny marika hafa rehetra mipoitra, aseho na ampiasaina ao amin'ny tranokala na amin'ny ampahany amin'ny serivisy dia voasoratra na antontan-taratasim-panjakana na marika ara-dalàna ao amin'ny Stumari, Inc. Ireo varotra ireo dia mety tsy azo adika. , alaina, namerina, nampiasaina, nohavaozina, na nizara tamin'ny fomba rehetra tsy nisy fahazoan-dàlana an-tsoratra avy tany Stumari, afa-tsy ho ampahany tsy azo itokisana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana nomenao alalana.
Fifandraisana amin'ny mailaka. Mampiasa ny mailaka sy ny fitaovana elektronika izahay mba hifandraisan'ireo mpampiasa anay.
Ilaina ny resaka elektronika. Ho an'ny tanjon'ny fifanarahana, (i) manaiky ny fandraisana fifandraisana avy amin'i Stumari amin'ny endrika elektronika amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka izay natolotrao na tamin'ny serivisy; ary (ii) manaiky fa ny fepetran'ny fampiasana rehetra, fifanarahana, fampahafantarana, fampahalalana, ary fifandraisana hafa izay omen'i Stumari anao dia manome fahafaham-po ny fitakiana ara-dalàna izay hanomezana fahafaham-po ny serasera toy izany raha voasoratra an-tsoratra. Ity fizarana ity dia tsy misy fiantraikany amin'ny zonao tsy azo lavina.
Fanamarihana ara-dalàna ho an'i Stumari dia tsy maintsy an-tsoratra. Ny serasera vita amin'ny alàlan'ny mailaka na rafitra fampiakarana manokana an'ny serivisy dia tsy ho fampahafantarana an'i Stumari na any amin'ny manamboninahitra, mpiasa, mpiasa na solontenantsika amin'ny toe-javatra rehetra izay angatahan'i Stumari amin'ny alàlan'ny fifanarahana na misy lalàna na fitsipika.
Famaranana. Azonao atao ny manafoana io fifanarahana io ary akatona ny kaontinao amin'ny fotoana rehetra. Ny fampitsaharana ny serivisy Stumari dia tsy mamarana ny fifandraisan'ny mpisolovava-mpanjifa na adidy.
Azonao atao ny mamarana ity fifanarahana ity. Raha te hampiato ity fifanarahana ity na ny kaontinao amin'ny serivisy ianao dia mety hijanona tsy hampiasa Stumari fotsiny. Raha te hamafa ny angon-kaontin'ny mpampiasa anao ianao dia mifandraisa amin'i Stumari ao [email voaaro] Hotazominay sy hampiasa ny mombamomba anao araka izay ilaina izahay hanarahana ny adidinay ara-dalàna, hamaha ny fifanolanana ary hampihatra ny fifanarahana nifanaovanay, fa ny fanakanana ny fitakiana ara-dalàna, hamafana ny mombamomba anao ao anatin'ny 30 andro.
Stumari May hampiato io fifanarahana io. Stumari dia mety hamarana ny fidiranao amin'ny rehetra na amin'ny ampahany amin'ny tranokala amin'ny fotoana rehetra, misy na tsy misy antony, miaraka na tsy misy fampahalalana, mahomby avy hatrany.
Fifandraisana eo anelanelan'ny fananganana mpisolovava sy ny fanafoanana ny mpanjifa. Ny fijanonan'ny fifandraisanao amin'i Stumari dia tsy misy fiantraikany amin'ny fifandraisanao amin'ny mpanolo-tsaina na mpanjifa iray izay nitazomanao tamin'ny alàlan'ny Stumari Service. Ny adidy ara-dalàna, ny fifanarahana ary ny etika rehetra, ny andraikiny sy ny andraikitra rehetra dia maharitra amin'ny fifaranan'ny fifandraisana Stumari.
Famaranana fihamatsy ny sasany Ny fepetra rehetra amin'ity fifanarahana ity izay amin'ny alàlan'ny mahavelona azy ireo dia ho velona amin'ny famaranana, ao anatin'izany, tsy misy fetra, fametrahana ny tompony, famerenam-pananana, famerenam-bola ary fetran'ny andraikitra.
Fandoavana sy fandefasana.
Fomba fandoavam-bola. Ny fandoavam-bola dia arahana araka ny voalaza ao amin'ny tolo-kevitra sy / na faktiora ary ifanarahan'ny Mpanjifa ara-dalàna sy ny mpampiasa consultant. Rehefa ny Job (na ny ampahany aminy efa nifanarahana mialoha tamin'ny alàlan'ny fanoratana ataon'ny Mpanjifa Ara-dalàna sy ny Mpampiasa Mpanolo-tsaina) dia voamariky ny namitan'ny Mpampiasa Mpanolo-tsaina azy, i Stumari dia hampandre ny Mpanjifa Ara-dalàna fa ny Job (na ny ampahany amin'izany dia efa nifanarahana mialoha amin'ny fanoratana nataon'ny Mpanjifa Ara-dalàna sy ny Mpampiasa Mpanolo-tsaina) dia feno. Ny mpanjifa ara-dalàna dia tsy maintsy mandoa ny vola nifanarahana na mangataka fanovana. Raha tsy nandray andraikitra ny mpanjifa ara-dalàna aorian'ny 10 andro, dia manan-jo handoa ny carte de crédit an'ny mpanjifa ara-dalàna, kaonty banky, na kaonty PayPal ny mpanjifa ara-dalàna, miaraka amin'ny serivisy na fanodinana azo ampiharina. sarany. Ny mpanjifa ara-dalàna dia mety mandefa ady amin'ny fandoavana vola amin'ny [email voaaro] raha toa ka manaraka ny fepetra hafa voalaza ao amin'ny Fizarana 14 (Fomba famahana ny fifanolanana ho an'ny mpanjifa mpanjifa ara-dalàna).
Andraikitra amin'ny fandoavana. Tompon'andraikitra amin'ny sarany rehetra ianao, ao anatin'izany ny hetra, serivisy ary sarany fanodinana, mifandraika amin'ny fampiasanao ny serivisy. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy dia manaiky ianao handoa ny mpampiasa consultant amin'ny alàlan'ny Stumari ny vola nifanarahana tao amin'ny Bid na ny faktiora tsy voadinika, ary ny serivisy momba ny serivisy sy ny fikarakarana, raha tsy hoe mifanipaka amin'ny faktiora ianao amin'ny fandefasana mailaka amin'ny [email voaaro] ary manaraka ny fepetra hafa voalaza ao amin'ny Fizarana 15 (Fomba famahana ny fifanolanana ho an'ny mpanjifa mpanjifa ara-dalàna). Tompon'andraikitra amin'ny fanomezana anay fomba fandoavam-bola mety aminay ianao.
Andraikitra nataon'i Stumari. Manaiky i Stumari hanolotra anao amin'ny fangatahana feno isaky ny fiampangana mialoha ny handoa ny kaontinao na ny kaonty PayPal. Manaiky i Stumari handoa ilay mpampiasa Consultant ampiharina ny vola voarainy, kely kokoa ny serivisy na ny fanodinana fiasa, raha misy.
Fahazoan-dàlana fandoavam-bola. Ny fankatoavanao ireo teny ireo dia omena alalana an'i Stumari handoa karatra amin'ny kaontinao, kaonty PayPal, na fomba fandoavam-bola efa nankatoavina natokana ho an'ny saram-bola omenao i Stumari. Miankina amin'ny antsipiriany momba ny Bid anao dia mety mampiakatra anao i Stumari amin'ny fotoana iray na miverimberina. Nomena alàlana an'i Stumari ianao hanome vola anao manontolo ny trosa rehetra amin'ny mpampiasa iray amin'ny consultant amin'ny alàlan'ny serivisy, ary koa ny serivisy sy ny fanodinana fanodinana. Mba hialana amin'ny fisalasalana, raha amin'ny tranga iray manokana, ny mpampiasa consultant dia mampiasa ny serivisy hanasana anao ho an'ny serivisy ara-dalàna afa-tsy ireo lohahevitry ny Bid, amin'ny alàlan'ny fametrahana ny kaontinao na ny kaonty PayPal amin'ny alàlan'i Stumari na ny mpikirakira ny fandoavam-bola fahatelo ataonay, manaiky ianao ary manaiky fa ny fampiharana ny fandoavana ao amin'ity fizarana 12 ity dia ampiharina.
Ny antoka an'ny mpampiasa mpanoro hevitra voamarina voafetra ho an'ny mpampiasa. Stumari no manome antoka ny fandoavana ny fangatahan'ny mpampiasa Mpanoro hevitra voamarina ho an'ny fahavitan'ny asa (na ny ampaham-potoana ao aminy izay efa nekena mialoha hanoratan'ny Mpisolovava ara-dalàna sy ny mpampiasa Mpanolotsaina) ho an'ny Mpanjifa ara-dalàna ("Garim-bola voafetra voafetra i Stumari"), miankina amin'ny manaraka ny fepetra sy ny fepetra (ny «Fepetra ho an'ny karama voafetra»):
Ny mpanjifa ara-dalàna dia tsy nahavita nameno ny fahazoan-dàlana an'ny mpampiasa Mpanamarina voamarina (ny habetsaky ny fidiram-bola toy izany, ny "Unpaid Invoiced Amour") tamin'ny fiafaran'ny andro fahafolo (10ème) taorian'ny lanjan'ny invoice (daty toy izany, ny " Daty tokony handoavana ny mpanjifa ara-dalàna ”).
Ny Mpampiasa Mpanolotsaina Voamarina dia nandefa an'i Stumari fangatahana an-tsoratra momba ny sandan'ny faktiora tsy voaloa (i) ao anatin'ny fe-potoana iray andro roapolo (21), manomboka amin'ny andro manaraka ny daty tokony haloan'ny mpanjifa ara-dalàna (fe-potoana toy izany, ny "Voamarina Fotoana fanoloran-tenan'ny mpampiasa mpanolo-tsaina ”) sy (ii) manome amin'ny antsipiriany ny zava-misy sy ny toe-java-misy ao amin'ny Job, ao anatin'izany ny anton-kevitra rehetra nomen'ny Mpanjifa Ara-dalàna ny tsy fandoavany vola toy izany sy / na ny antony mety azon'ny mpisolovava atao tsara Ny finoana dia maminavina ny antony tsy handoavan'ny mpanjifa ny fandoavam-bola (fangatahana toy izany, "Fangatahana antoka momba ny fandoavam-bola voafetra"). Ny tsy fandefasana ny fangatahana antoka momba ny fandoavam-bola voafetra ao anatin'ny fe-potoana fandefasana ny fangatahan'ny mpampiasa ny mpanolo-tsaina voamarina dia ny fandoavana maharitra ny zon'ny Mpanolo-tsaina toy izany handray ny vola tsy voaloa tsy voaloa avy amin'ny olona na fikambanana, ao anatin'izany ny Stumari sy ny mpanjifa ara-dalàna. Raha toa ka tapa-kevitra manokana i Stumari fa ara-drariny ny fanaovana izany, dia afaka manohy ny ezaka fanangonana amin'ny Mpanjifa ara-dalàna izy ary raha mahomby, ny Mpampiasa ny mpanolo-tsaina voamarina dia handray ny anjarany amin'ny vola voaangona, ahenao ny fandaniana amin'ny fanangonam-bola Stumari any ivelany, araka ny 12e etsy ambony.
Raha toa ka mandefa fangatahana antoka momba ny fandoavam-bola voafetra ao anatin'ny vanim-potoana fandefasana ny fangatahana mpampiasa ny mpanolo-tsaina voamarina, ary ny fangatahana toy izany dia misy ny fampahalalana voalaza ao amin'ny andalana 14.b. etsy ambony, i Stumari dia hiezaka amin'ny finoana tsara hiara-hiasa amin'ny Mpampiasa Mpanjifa ara-dalàna sy voamarina mandritra ny fe-potoana fito (7) andro kalandrie manomboka amin'ny datin'ny Fangatahana antoka momba ny fandoavam-bola voafetra (vanim-potoana toy izany, ny Fotoana fanelanelanana ") hamahana ny olana izay foto-kevitry ny fangatahana antoka momba ny fandoavam-bola voafetra (ny" Raharaha miady amin'ny fifanakalozana mifandraika amin'ny fandoavam-bola "). Raha toa ka voavaha tsara ao anatin'ny vanim-potoana fanelanelanana mifandraika amin'ny fandoavam-bola ny raharaha mifandraika amin'ny fandoavam-bola, ny tsirairay amin'ny mpanjifa ara-dalàna, mpampiasa consultant voamarina ary, raha ilaina izany, dia handray ny fepetra nifanarahana i Stumari mba hanatanterahana ilay nifanarahana. vahaolana.
Raha toa ka mbola tsy voavaha ny fehezan-kevitry ny fifanakalozana mifandraika amin'ny fandoavam-bola amin'ny faran'ny vanim-potoana fanelanelanana mifandraika amin'ny fandoavam-bola, tsy mihoatra ny andro kalandrie fahafito (faha-7) aorian'ny fiafaran'ny fe-potoana fanelanelanana mifandraika amin'ny fandoavam-bola (ny daty ny fanapaha-kevitra toy izany dia ampitaina an-tsoratra amin'ny Mpanolo-tsaina Mpampiasa Lozisialy sy Voamarina, ny “Datin'ny Fanapahan-kevitr'i Stumari”), Stumari dia handray fanapahan-kevitra amin'ny fahaiza-manaony tokana (ny “Fanapahan-kevitra momba ny adihevitra momba ny Stumari”), miorina amin'ny ny fampahalalana nomen'ny Mpampiasa Mpanolotsaina Voamarina ary, raha omena, ny Mpanjifa Ara-dalàna, raha mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria, ny fepetra ao amin'ny Tolotra mifandraika ary ireo teny ireo raha toa ka misy izany sy ny fepetra. Raha manapa-kevitra i Stumari fa ny adihevitra mifandraika amin'ny fandoavam-bola ho an'ny mpampiasa mpanolo-tsaina voamarina, i Stumari dia hamerina ilay sandan'ny faktiora tsy voaloa ho an'ny mpampiasa mpanolo-tsaina voamarina ao anatin'ny kalandrie fito (7) andro aorian'ny daty mamaritra ny laharam-pahamehana Stumari, ary ny mpampiasa mpanolo-tsaina voamarina dia heverina ho nanolotra ny zony rehetra manoloana ny raharaha mifandraika amin'ny fandoavam-bola amin'ny Stumari. Na eo aza ny zavatra voalaza eto na amin'ny fomba hafa mifanohitra amin'izany, ny vola dolara tadiavina ao amin'ity Fizarana 14 ity dia tsy tokony hihoatra ny vola nifanarahana tamin'ny Mpampiasa Mpanolo-tsaina Voamarina mifandraika amin'ny Job na vola nifanarahana tao anaty taratasy fifanarahana vita sonia na hafa fifanarahana an-tsoratra nifanaovan'ny roa tonta, ary raha sendra izany dia tsy tokony hihoatra ny $ 5,000 ny fanangonana amin'ny faktiora rehetra tsy voaloa nalefan'ny Mpanolo-tsaina Voamarina ho an'ny Mpanjifa Ara-dalàna.
Raha manapa-kevitra i Stumari fa ny raharaha mifandraika amin'ny fandoavam-bola ho an'ny mpanjifa ara-dalàna, dia tsy adidy intsony ny mpanjifa ara-dalàna handoa ny vola tsy voaloa tsy voaloa amin'ny Mpanolotsaina voamarina ary heverina fa nanolotra ny zony rehetra. raha ny momba ny raharaha iadian-kevitra mifandraika amin'ny fandoavam-bola amin'ny Stumari toy ny daty mamaritra ny daty famaritana Stumari. Amin'ny tranga toy izany, ny Mpanolotsaina Voamarina Mpampiasa dia (i) heverina ho nandao ny zony hitady vola toy izany avy amin'ny Mpanjifa ara-dalàna, ary (ii) manan-jo hanomboka ny fizotran'ny fifampiraharahana mifehy ny sandan'ny faktiora tsy voaloa. Stumari izay mitovy amin'ireo fizotrany voalaza ao amin'ny Fizarana 21.d. eto (Arbitration) amin'ny fanomezana an'i Stumari fampandrenesana an-tsoratra momba ny fampiharana izany zony izany ao anatin'ny 10 (XNUMX) andro kalandrie taorian'ny faran'ny datin'ny famaritana an'i Stumari izay nifandirana (fe-potoana toy izany, ny "Fotoam-pifanarahana amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fandoavam-bola" ). Raha toa ka tsy mampiasa ny zony hanombohana ny fizotran-kevitra ny Mpanolotsaina Voamarina mandritra ny vanim-potoana fe-potoana hifidianana ny fifandirana eo amin'ny fandoavam-bola dia heverina fa efa nanafoana maharitra ny zony amin'ny fandoavana ny vola tsy voaloa tsy voaloa.
Tokony ho tonga saina ve i Stumari fa ny kaonty amin'ny alàlan'ny kaonty amin'ny alàlan'ny kaonty, ny kaonty PayPal, na ny fomba fandoavam-bola efa nankatoavina dia tsy manan-kery intsony, na tokony hahatsapa i Stumari fa ny Client Legal dia tsy misy antony manan-kery, na tsy te handoa na tsy mahavita mandoa. ho an'i Joba, na asa hafa na Inpaice hafa tsy voaloa ao amin'ny Stumari, dia hampandre i Stumari fa ny mpampiasa / Mpanolotsaina voamarina momba ny mpanjifa voamarina momba ny fandoavan-dalàna mifandraika amin'ny fandoavana (ny fampahafantarana)). Ny serivisy rehetra ataon'ilay mpampiasa Mpanamarina voamarina mialoha alohan'ny fampandrenesana dia miankina amin'ny "Garanti-n'ny fandoavam-bola voafetra", na dia ny serivisy rehetra ataon'ny Vondron-kevitra Mpanamarina voamarina ao aorian'ny fampandrenesana aza dia tsy miankina amin'ny "Garim-bola voafetra voafetra." Raha ny mpampiasa mpampiasa Mpanamarina voamarina dia hametraka invoice amin'ny mpanjifa ara-dalàna ho an'ny serivisy izay natao aorian'ny fampandrenesana, dia mbola hanao ezaka i Stumari hanangona vola ho an'ireo tolotra ataon'ilay mpampiasa Mpanamarina voamarina.
Fitsipi-pitondrana momba ny hevitra momba ny adihevitra momba ny olana momba ny mpampiasa-voamarina ao amin'ny mpanjifa. Raha toa ny mpanjifa ara-dalàna dia mino tsara fa ny toetra na ny kalitaon'ny serivisy ara-dalàna omen'ny mpampiasa iray Mpanamarina voamarina mifandraika amin'ny asa mifandraika amin'izany dia tsy mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria na ny fepetra omen'ny B mifandraika na ireto voalaza ireto ary Ny fepetra, na ny sandam-bola natokana ho an'ny serivisy ara-dalàna omen'ny mpampiasa consultant toy izany dia tsy mifanaraka amin'ny Bid toy izany (izany resaka izany, "Matotra mifandraika amin'ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy"), dia avela hizaka ny fandoavam-bola izy ireo. ny lohahevitra momba izany (ny "Volan'ny fandoavam-bola nitazona"), mifanaraka amin'ireto fepetra sy fepetra manaraka ireto (ny "fepetra takiana amin'ny karama raikitra"):
Ao anatin'ny folo (10) andro kalandrie taorian'ny datin'ny faktiora mifandraika amin'izany (ny vanim-potoana toy izany, ny "vanim-potoanan'ny fampandrenesana ny mpanjifa ara-dalàna"), ny mpanjifa ara-dalàna dia manome fampandrenesana an-tsoratra an'i Stumari izay milaza amin'ny antsipiriany mety ny zava-misy sy ny toe-javatra izay ifotony momba ny raharaha ifandraisan'ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy (tsirairay avy, “Filazana fifandirana mifandraika amin'ny serivisy”). Ny tsy fahombiazan'ny mpanjifa ara-dalàna mandefa fampandrenesana mifandraika amin'ny serivisy mifandraika amin'ny vanim-potoana fampandrenesana momba ny fifanolanana amin'ny mpanjifa ara-dalàna dia ny fanafoanana maharitra ny mpanjifa ara-dalàna ny zon'izy ireo hifandahatra amin'ireo vola nitazona ny vola nitazomana azy, izay vola ampangaina amin'ny antontan-taratasin'ilay mpanjifa ara-dalàna carte de crédit, kaonty PayPal, na fomba fandoavam-bola ankatoavina mifanaraka amin'ny Fizarana 13.d. amin'ireo Fepetra fampiasana ireo.
Raha toa ka mandefa fampandrenesana mifandraika amin'ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fampandrenesana ny mpanjifa ara-dalàna ny Mpanjifa ara-dalàna, ary izany fangatahana izany dia misy ny fampahalalana voalaza ao amin'ny andalana 15.a. etsy ambony, i Stumari dia hiezaka amin'ny finoana tsara hiara-hiasa amin'ny Mpampiasa Mpanjifa ara-dalàna sy voamarina mandritra ny fe-potoana hatramin'ny dimy ambin'ny folo (15) andro kalandrie manomboka amin'ny datin'ny fampandrenesana momba ny fifanolanana mifandraika amin'ny serivisy (vanim-potoana toy izany, ny "Serivisy mifandraika amin'ny serivisy Fotoana fanelanelanana lehibe ") hamahana ny raharaha ifandresen-dahatra mifandraika amin'ny serivisy. Raha toa ka voavaha tsara ao anatin'ny vanim-potoana fanelanelanana mifandraika amin'ny serivisy ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy, ny tsirairay amin'ny mpanjifa ara-dalàna, mpampiasa consultant voamarina ary raha ilaina izany dia handray ny fepetra nifanarahana i Stumari mba hanatanterahana ilay nifanarahana. vahaolana.
Raha toa ka mijanona ho tsy voavaha ny fehezan-dresaka mifandraika amin'ny serivisy amin'ny faran'ny vanim-potoana fanelanelanana mifandraika amin'ny serivisy, tsy ela akory ny andro kalandrie faha-14 (7) taorian'ny faran'ny vanim-potoana fanelanelanana mifandraika amin'ny serivisy, Stumari dia manapa-kevitra amin'ny fahefany irery sy tanteraka (ny "fanapaha-kevitra momba ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy"), ary miorina amin'ny fampahalalana nomen'ny Mpampiasa Mpanolotsaina Mpanjifa Ara-dalàna, momba ny toetra sy kalitaon'ny serivisy ara-dalàna navoaka mifandraika amin'ny Job izay foto-kevitry ny raharaha mifandraika amin'ny serivisy dia nifanaraka tamin'ny fenitry ny indostria, ny fepetra voalaza ao amin'ny Bid sy ireo fepetra sy fepetra ireo. Raha manapa-kevitra i Stumari fa ny raharaha mifandraika amin'ny serivisy ho an'ny mpampiasa mpanolo-tsaina voamarina, ny mpanjifa ara-dalàna dia manana adidy handoa ny vola aloan'ny fandoavana voatazona amin'ny mpampiasa consultant toy izany ao anatin'ny fe-potoana fito (13) andro kalandrie aorian'ny andro nampiasana azy Ny mpanjifa ara-dalàna dia ampandrenesina an-tsoratra amin'ny fanapaha-kevitry ny raharaha Stumari Services-related adihevitra (ny "Fanambarana fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy"). Raha toa ka tsy mahavita mandoa vola ara-potoana ny mpanjifa ara-dalàna, dia halefan'ny Stumari amin'ireo mpampiasa Mpanolo-tsaina voamarina ireo vola nitazona azy ireo izay hanome ny zony hamerina ny vola toy izany ho an'i Stumari izay mety, amin'ny alàlan'ny fahendreny irery, ny fanodinana vola mifanaraka amin'izany mankany amin'ny Fizarana XNUMX.d sy ​​/ na olom-boafidy hanaraka ny zony sy ny vahaolana manohitra ny Mpanjifa Ara-dalàna.
Raha manapa-kevitra i Stumari fa ny raharaha mifandraika amin'ny serivisy dia manohana ny mpanjifa ara-dalàna, ny mpanjifa ara-dalàna dia tsy ho adidy intsony ny mandoa ny vola aloa amin'ny mpiambina voamarina ary heverina ho nanolotra ny zony rehetra izy. momba ny Serivisy mifandraika amin'ny serivisy momba an'i Stumari. Amin'ny tranga toy izany, ny Mpanolo-tsaina Voamarina Mpampiasa dia (i) heverina ho nandao ny zony hitady vola toy izany avy amin'ny Mpanjifa ara-dalàna, ary (ii) manan-jo hanomboka ny fizotran'ny fifampiraharahana mifandraika amin'ireo vola nitazona. Stumari izay mitovy amin'ireo fizotrany voalaza ao amin'ny Fizarana 21.d. eto (Arbitration) amin'ny fanomezana an'i Stumari fanamarihana an-tsoratra momba ny fampiharana izany zo izany ao anatin'ny kalandrie folo (10) andro aorian'ny datin'ny fampandrenesana momba ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy (fe-potoana toy izany, ny "vanim-potoana mifandraika amin'ny fifandraisan-davitra mifandraika amin'ny serivisy. "). Raha toa ka tsy mampiasa ny zony hanombohana ny fizotran'ny fitsarana arak'asa mandritra ny vanim-potoana mifandraika amin'ny serivisy mifandraika amin'ny serivisy ny Mpanolo-tsaina voamarina dia heverina fa efa nanafoana ny zony amin'ny fandoavana ny vola aloa amin'ny vola nitazomana izy. .
Raha toa ka ny tompon'andraikitra mpanolo-tsaina voamarina sy voamarina ara-dalàna dia samy nahazo ny zon'ny voalahatra ao amin'ny fizarana 14 sy ny Fizarana 15, ireo fomba voalaza ao amin'ny Fizarana 15 dia tokony hatao mialoha noho ny raharaha voalaza ao amin'ny Fizarana 14 sy ny mpampiasa voamarina. Manaiky ny hanilany ny zony maharitra ny zon'ny mpanolo-tsaina hanohy ny zony napetraka ao amin'ny Fizarana 13 momba ny zava-misy sy ny zava-misy eo amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny fandoavana. "Fomba fandraisana fanapahan-kevitra momba ny fifandirana amin'ny fomba hafa".
Disclaimer of Warranties. Manome ny serivisy tahaka ny misy izahay, ary tsy manome toky na antoka momba izany serivisy izany izahay. Azafady vakio tsara ity fizarana ity; tokony ho azonao ny zavatra andrasana.
Stumari dia manome ny tranokala sy ny serivisy "tahaka ny", tsy misy karazana antoka. Raha tsy misy famerana ny zavatra voalaza tetsy aloha, dia nolavin'i Stumari avokoa ny antoka rehetra, na voambara, voatonona na lalàm-panombohana, momba ny tranokala sy ny serivisy, ao anatin'izany, tsy misy fetra, ny fiantohana ny fivarotana, fahasalamana ho an'ny tanjona manokana, lohateny, fiarovana, marina ary tsy fanitsakitsahana.
Raha ny marimarina manokana, i Stumari dia tsy manome fanehoana na antoka hanomezana toky ny fampahalalana nomenay na omena amin'ny alàlan'ny serivisy, na azo antoka na marina; fa ny serivisy dia mahafeno ny zavatra takinao; fa ny serivisy dia mety amin'ny fotoana na toerana voafetra, fa ny serivisy dia hiasa amin'ny fomba tsy misy fiatoana na ho azo antoka; fa misy lesoka na hadisoana hanitsy azy; na hoe tsy misy otrikaretina na singa manimba ny serivisy. Ianao dia mandray ny andraikitra feno sy ny risika mety ho very noho ny fampiasana ny fampahalalana, ny votoatiny na ny fitaovana hafa azo avy amin'ny serivisy. Ny fetra sasany dia tsy mametra na tsy manome alalana ireo mpampandàla antoka, noho izany dia mety tsy mihatra aminao io fepetra io.
Limitation of liability. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana na fatiantoka nateraky ny fampiasana ny serivisy ianao na hitranga eto amin'ity fifanarahana ity. Azafady vakio tsara ity fizarana ity; mametra ny adidinay aminao izany.
Raha araka ny lalàna eken'ny lalàna ampiharina, tsy misy na oviana na oviana i Stumari aminao noho ny fahaverezan'ny tombom-barotra, fampiasana, na data, na misy fahavoazana tsy mivantana, tsy ankolafy, manokana, vokatr'izany na vokam-panadinana, na izany aza, mipoitra avy amin'ny (i ) ny fampiasana, fanambaràna na fampisehoana ny votoatin'ny mpampiasa anao; ii) ny fampiasana na ny tsy fahafahanao mampiasa ny serivisy; iii) ny serivisy amin'ny ankapobeny na ny rindrambaiko na rafitra izay manome ny serivisy; na (iv) misy fifaneraserana hafa miaraka amin'i Stumari na mpampiasa mpampiasa ny serivisy hafa, na miorina amin'ny warranty, fifanarahana, fampijaliana (anisan'izany ny tsy miraharaha) na ny teoria ara-dalàna, ary na tsia aza i Stumari dia nampahafantarina ny mety hisian'izany fahasimbana izany. ary na dia vahaolana iray napetraka tao amin'ity Fifanarahana ity aza dia hita fa tsy nahomby tamin'ny tanjony lehibe. Stumari dia tsy hanana andraikitra amin'ny tsy fahombiazana na ny fanemorana noho ny raharaha mihoatra ny fika azontsika ekena. Ny fetra sasany dia tsy voafetra na tsy avelan'ny tompon'andraikitra amin'ny fiampangana azy, ka tsy azo ampiharina aminao io fepetra io.
Famotsorana sy fanamafisana.
Manaiky ianao hanome trosa sy hihazona an'i Stumari tsy mampidi-doza avy amin'ny sy manohitra ny fangatahana rehetra sy ny fandaniana, anisan'izany ny saram-mpisolovava, noho ny fampiasanao ny tranokala sy ny serivisy, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fandikanao io fifanarahana io.
Raha manana fifandirana amin'ny mpampiasa iray na maromaro ianao dia mamoaka an'i Stumari amin'ny fitakiana, fitakiana sy fahavoazana (tena izy ary vokatr'izany) ny karazan-toetra sy ny toetra rehetra, fantatra sy tsy fantatra, nipoitra na nifamatotra tamin'ny fifandirana toy izany. Raha mponina any California ianao, dia mandà ny code soatoavina any California §1542, izay milaza hoe: "Ny famoahana amin'ny ankapobeny dia tsy miakatra amin'ny fangatahana izay tsy fantatry ny mpampindram-bola fa mankasitraka azy amin'ny fotoana hanatanterahana ny famoahana azy. fantatry ny aminy dia tsy maintsy nisy fiantraikany ara-nofo ny fanorenany tamin'ny mpampindram-bola. ”
Fanovana ny fomba fampiasana. Stumari dia afaka manitsy an'ity fifanarahana ity indraindray, ary araka ny fahendren'i Stumari irery. Hanome fampandrenesana ho an'ireo mpampiasa fiovana ara-materialy momba ity fifanarahana ity izahay (i) amin'ny alàlan'ny fandefasana fampandrenesana amin'ny adiresy mailaka voalohany voalaza ao amin'ny kaontinao, izay hanan-kery eo noho eo amin'ny fandefasanay ity mailaka ity, sy / na (ii) amin'ny alàlan'ny tranokalanay. farafahakeliny 30 andro mialoha ny fanovana hisy amin'ny alàlan'ny fandefasana fampandrenesana ao amin'ny pejin-tranontsika. Ny fanovana tsy ara-materialy an'ity fifanarahana ity dia hanomboka eo noho eo. Manentana ny mpitsidika izahay hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana amin'ny fifanarahana ity. Ny fampiasanao ny serivisy fitohizanao aorian'ny daty mahomby amin'ny kinova nohavaozina tamin'ity fifanarahana ity dia midika fa ekenao ny fe-potoany.
Miscellaneous. Ity fifanarahana ity dia fehezin'ny lalàna ao California. Ianao ary ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny adidy ekenao eo ambanin'ity fifanarahana ity. Raha tafiditra ao anaty fitambaran-tsoa isika na vidiana, dia azontsika atao ny mamindra an'io Fifanarahana io, raha toa ka voaro ny zonao. Azonao atao ihany ny manaiky an'io teny io raha toa ka afaka mamorona fifanarahana mifamatotra amin'ny fanjakanao ianao. Ireo teny ireo, ao anatin'izany ny politikantsika manokana, dia fifanarahana feno eo amintsika, ary tsy misy teny hafa ampiharina.
Lalàna mifehy. Raha tsy misy ny lalàna mifandraika amin'izany, ity fifanarahana misy eo aminao sy i Stumari ity sy ny fidirana amin'ny fampiasana ny tranokala na ny serivisy dia fehezin'ny lalàna federaly amerikanina sy ny lalànan'ny Fanjakana any California, tsy misy fiheverana. mifanipaka amin'ny fanomezana lalàna. Miara-hanaiky ianao sy i Stumari hanaiky ny fifehezana manokana sy ny toeram-pitsarana izay misy ao an-tanàn-dehibe sy ao amin'ny distrikan'i San Francisco, Kalifornia, afa-tsy voalaza ao ambany ao anatin'ity fifanarahana ity.
Fanamaroana. Raha misy ampahan'io fifanarahana io dia tsy manan-kery na tsy voamarina, ny ampahan'io fifanarahana io dia raisina ho taratry ny tanjon'ny andaniny sy ny ankolafy. Ny ampahany sisa dia hitoetra amin'ny hery sy ny vokatra rehetra. Izay tsy fahombiazan'ny Stumari hampihatra izay manome ity fifanarahana ity dia tsy hoheverina ho fanilihana ny zontsika hanaiky izany fepetra izany. Ny zontsika ambanin'ity Fifanarahana ity dia ho tafavoaka amin'ny fanafoanana ity fifanarahana ity.
Famerana ny fehezin'ny asa. Manaiky ianao fa ny antony rehetra amin'ny hetsika na nipoitra tamin'ny fifandraisanao tamin'i Stumari dia tsy maintsy atomboka ao anatin'ny iray taona aorian'ny nahatonga ny hetsika. Raha tsy izany, voasakana mandrakizay ny anton-javatra toy izany.
Fanelanelanana. Raha misy fifandirana eo aminao sy Stumari, tianay ny hanome anao fitaovana tsy miandany na misy vidiny mba hamahana haingana ny fifandirana. Noho izany, ho an'ny fangatahana rehetra (afa-tsy ny fangatahana fanamaivanana na fampitovian-dàlana na fitakiana momba ny zon'ny fananana ara-tsaina) ao ambanin'ity Fifanarahana ity, na ny andiany dia afaka mifidy ny hamaha ny fifanolanana misy eo ambanin'ity Fifanarahana ity amin'ny alàlan'ny fifamatorana tsy misy endrika. Ny antoko mifidy ny mpifidy dia tokony hanomboka izany amin'ny alàlan'ny mpamatsy vahaolana hafa mifandahatra ("ADR") izay nifaneken'ny roa tonta. Ny mpamatsy ADR sy ny antoko dia tsy maintsy manaraka ireto fitsipika manaraka ireto: (a) hotanterahina ny fitsarana, amin'ny safidy ny fangatahana fangatahana fanampiana, amin'ny alàlan'ny telefaona, an-tserasera, na miankina amin'ny fandefasana an-tsoratra; (b) ny fifampiraharahana dia tsy hisy fisehoana ifandraisany manokana avy amin'ny antoko na vavolombelona raha tsy efa nifaneken'ny roa tonta; ary (c) ny fitsarana rehetra nomen'ny mpanelanelana dia azo apetraka ao amin'ny fitsaràn'ny fitsarana mahay.
Non-Assignability. Stumari dia afaka manendry na manolotra ireo fombafomba fampiasana sy / na ny Politikan'ny tsiambaratelo Stumari, na amin'ny ampahany na amin'ny ampahany, amin'ny olona na vondrona hafa rehetra amin'ny fotoana na miaraka amin'ny tsy fanekenanao. Azonao atao ny tsy manendry na manolotra zo na andraikitra ao ambanin'ny Fehezan-dalàna momba ny fampiasana na lalàna momba ny tsiambaratelo raha tsy nisy fanekena an-tsoratra taloha nataon'i Stumari, ary ny andraikitra sy ny delegasiona tsy nahazoanao alàlana dia tsy manan-kery.
Lohateny sy fizarana famintinana tsy fatorana. Mandritra ity fifanarahana ity, ny fizarana tsirairay dia ahitana lohateny sy famintinana fohifohy momba ireo teny sy fepetra manaraka ireto. Ireo lohateny fizarana sy famintinana fohy ireo dia tsy fehezin'ny ara-dalàna.
Fahazoan-dàlana amin'ny fifanarahana. Ianao dia misolo tena sy manome toky fa raha olona iray ianao, dia manana ny toe-dalàna ianao hamorona fifanarahana mifamatotra; na raha toa ianao ka misoratra anarana amin'ny solosaina, dia omena alalana hidiranao ianao ary hamatotra ny enti-manana, ireo Fepetra fampiasana ary misoratra anarana ho an'ny serivisy.
Ekenao fa efa namaky ireo fombafomba fampiasana ireo ianao, mahatakatra ny fitsipi-pifehezana, ary ho voafehin'ireo fepetra sy fepetra ireo.